म तिम्रो श्रीमानकी प्रेमिका हुँ ! प्रेमविहिन विवाहलाई किन निभाइरहेकी छौ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
म तिम्रो श्रीमानकी प्रेमिका हुँ ! प्रेमविहिन विवाहलाई किन निभाइरहेकी छौ ?
तिमीहरुको विवाह भएको २० वर्ष बढी भइसकेको छ । तिमीहरुले विभिन्न नीजि र पारिवारिक उद्देश्य हाँसिल गरिसकेका होलाऊ । सँगै घर व्यवहार चलाउनु, आफ्ना सबैभन्दा प्रिय बच्चाहरुलाई प्रेम गर्नु लगायतका अन्य विभिन्न कुराहरु । तर केही कारणले वर्षौं अघि तिम्रो ती व्यक्तिका लागि प्रेम समाप्त भइसकेको छ ।
के तिमी उसलाई प्रेम गर्छौ ? के उसले प्रेम पाएको भए म भएठाउँ आउँथ्यो होला,? के उसलाई मेरो आवश्यकता पर्दथ्यो ? म तिमीलाई दोष दिइरहेकी छैन तर तिमीले सायद उसलाई प्रेम गर्न छोडिदिएकी छौ । तर तिमी देखाउनकै लागि एक प्रेमविहिन विवाहलाई किन निभाइरहेकी छौ ?
तिमी उसलाई त्यो प्रेम किन दिन सक्दिनौं जुन उसलाई आवश्यक छ रु ती उसलाई त्यो साथ र हेरबिचार किन दिन सकिरहेकी छैनौं जुन प्रेम गरेपछि पाइन्छ ।
तिमीहरुको विवाहमा प्रेम कहिले समाप्त भयो र किन रु तिम्रो श्रीमानबारे मलाई जति थाहा छ, उसले कहिले पनि धोका दिन सक्दैन । ऊ त्यस्तो प्रकृतिको व्यक्ति नै होइन । एक विवाहित पुरुषकी प्रेमिका भएको नाताले, जसले इमान्दारिता माग्ने कुनै अधिकार छैन, तरपछि ऊ इमान्दार थिए र मैले आशा गरेभन्दा एक कदम अघि बढेर मलाई सुरक्षित महसुस गराउँथ्यो । तिमीले उसको इमान्दारीता कसरी गुम्न दियौ ?
रोनाल्डो माथि कर छलिको अारोप
असार २ । रियल मड्रिडका चर्चित खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो माथि कर छलिको अारोप लागेको छ । यदि यस अारोपको […]
नेपाली सेनाभित्र अहिलेसम्मकै ठूलो काण्ठ, केही हाकिम जेल परे,कसैको जागिर खुस्कियो
काठमाडौं । सैनिक अदालतले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ३ अधिकृतसहित ११ जनालाई […]
काठमाडौँ, आइसिसी उन्नाइस वर्षमुनि यु–१९ को विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाली […]
एजेन्सी । रियल मड्रिडले लगातार तेस्रोपटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ । युक्रेनको राजधानी किएभमा […]
तान्जानिया : डुंगा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको स‌ख्या २ सय सात पुग्याे
नैरोबी । तान्जानियाको लेक भिक्टोरियामा शुक्रबार भएको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २०७ पुगेको […]
राजविराज, २२ वैशाख - सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पिपरास्थित माइतीमा बस्दै आएकी आफ्नी श्रीमती र सासूलाई एक […]